Best Hiking Start Points Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Hiking Start Points Na Europe
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 16/01/2021)
Na-akpọ niile junkies junkies na-achọ! You chọrọ ịmata ihe ndị Best hiking mmalite ihe na-esi ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè? Mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe!
Thunder Hiking Malite ihe: Ise Terre ala gbara osimiri okirikiri nzọ ụkwụ - ITALY
Hiking na Cinque Terre bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma ime na Italy, na otu onye nke Best hiking mmalite ihe. Ya hiking ụzọ ụkwụ na-n'etiti ndị kasị mara mma na Europe na ọ bụrụ na ị bụ onye na n'èzí n'anya ma ọ bụ dị nnọọ onye chọrọ ụfọdụ omumu n'etiti rụrụ Italian nri, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị akwụ ụgwọ iji nwee obi ụtọ ’stali oke osimiri.
Ma mgbe ị soro bulie onu na Cinque Terre mkpa ka ị bịa njikere. Site na nghota nzọ ụkwụ isi ike mbukota nri ihe na-aga na ziri ezi oge nke afọ, ịbụ nke ọma dabere ga-eme ka ihe dị iche n'etiti a na-agbanwe ndụ ibugo onu na a wearying slog.
Esi n'ebe Train:
• Ozugbo Italy, na-enyemaka nke Save A Train, ụgbọ okporo ígwè ka bụ ụzọ kasị mma iru Cinque Terre. E nwere ihe a obodo ụgbọ okporo, na Cinque Terre Express ụgbọ okporo, nke na-agba ọsọ, tinyere n'ụsọ oké osimiri n'etiti ụgbọ Centrale nke La Spezia na Levanto. Ọ na-akwụsị na niile obodo ise (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), na ị ga-mkpa iji ya ibugharịa n'etiti ha mgbe ị na-na-na na na ebe (gwụla ma ị na-ahọrọ na-soro bulie onu na OFT-aka ụzọ ụkwụ). Dị ka nke okpomọkụ 2016, na-eri nke Cinque Terre Express bụ € 4 kwa njem. N'oge anya-oge, a si November ka March, ndị na-eri tụlee ka € 1,80. Nke a ụgbọ okporo ígwè na-adịghị na-enye echekwabara aba.
• rutere si Florence ma ọ bụ Rome: E nwere ihe ole na ole kpọmkwem ụgbọ oloko kwa ụbọchị si Firenze Santa Maria Novella ojii ka La Spezia Centrale; ndị ọzọ na-achọ na ị na-agbanwe ụgbọ oloko na Pisa. Ahịa na-amalite na € 13,50. Na La Spezia, ịgbanwe maka Cinque Terre Express.
Thunder Hiking Malite ihe: Ugo eje ije - AUSTRIA
The Eagle Walk mee nke 23 jikọrọ nkebi, nke na-eso a ume-na-ewere ụzọ site na Tirol. The Best hiking mmalite ihe na mpaghara, ọtụtụ ngalaba nwere ike mfe enweta site cable ụgbọ ala na dechara dị ka a full- ma ọ bụ ọkara ụbọchị tour. Anyị ga-amasị ịme ka ị anyị mmasị na ngalaba nke a blog.
Ma ị na-eme atụmatụ a ụbọchị ibugo onu ma ọ bụ a multi-izu njem na ugwu, ị ga-achọta Eagle Walk na-a oké n'èzí ahụmahụ. Ọ na-enye enweghị atụ ohere inyocha, ahụmahụ, na jikọọ na uwa.
Anyị Top ghota: Lake Zireiner Lee
Ije ije ụbọchị ọkara maka ndị na-eme njem oge ụfọdụ. Site Kramsach na Lower Inn Valley, na-oche inwego na Sonnwendjoch ụlọ. A obere ije na-eduga ná idyllic Zireiner ọdọ, nke na nsogbu na ndagwurugwu fọrọ nke nta 1,800-mita n'elu oké osimiri larịị - a akwa ebe na-ajụkwa oyi na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ ọnwa. The ije na-aga n'ihu Zireiner ALM ịta nri (1,698m) tupu ya alọghachi n'elu oche inwego, ikwe gị na-agba ịnyịnya azụ rida na Inn Valley.
It’s easy to njem from the UK to Austria ụgbọ okporo ígwè. I nwere ike na-aga site London na Vienna, Salzburg ma ọ bụ Innsbruck na otu ụbọchị site elu-ọsọ ụgbọ okporo. Ma ọ bụ a nri ehihie Eurostar si London na Brussels, a Thalys high-speed ụgbọ okporo ka Cologne, na ihe ndị magburu onwe Nightjet sleeper ụgbọ okporo na Innsbruck, Linz, ma ọ bụ Vienna n'abali. ozugbo e, na-na Tirol dị mfe na ya mbara netwọk nke ọha iga. Ọ dị mfe na-eme njem gburugburu region iji ụgbọ oloko. Hikers na-achọ inwere na-na akụkụ ma ọ bụ niile nke Eagle Walk nwere ike ịnweta mmalite na imecha ihe ndị ọ bụla ogbo eji obodo ọha iga.
London na Brussels Ụgbọ oloko
Brussels na Cologne Ụgbọ oloko
Thunder Hiking Malite ihe: CAMINO DE SANTIAGO – SPAIN
The Camino mara na English dị ka Way of St James. All Camino pilgrimage routes lead to Santiago de Compostela as this is where the remains of St James, (Santiago), e chọpụtara na narị afọ nke itoolu. The pilgrimage was popular in the 10th, 11nke, na narị afọ nke iri na abụọ wee jiri nwayọọ jụ na ewu ewu.
Site na narị afọ nke 20, fọrọ nke nta ka ọ dịghị onye na-eje ije ọ bụla nke ụzọ gasị. Then in the late 1970’s and early 1980’s the route became of interest to a few. They began to write and map ụzọ gasị ọzọ.
Na narị afọ nke 21, echiche nke a njem uka bụ ikekwe quaint. Otú ọ dị, Mgbalị nke ije ije otu ọnwa na ịkwụpụ gị na ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ na-atọhapụ ya nke ukwuu.
Camino ụzọ gasị:
Sarria bụ obodo họọrọ site njem ala nsọ ka ebe ha iba na Camino de Santiago. Nke karịa 300,000 njem ala nsọ na bulie Santiago de Compostela na 2017, ụfọdụ 60% họọrọ iji na-eso Camino Frances. Na ndị ọzọ karịa 80,000 nke ha họọrọ Sarria ka ha amalite. Isi ihe mere ị na-ahọrọ Sarria bụ na ọ na-enye opekempe dị anya maka ndị njem ala nsọ ka e nye ha Compostela (ndị pilgrim ji akwụkwọ). The anya ka Santiago nwere ike kpuchie na ise nkebi nke na-etu ọnụ dị ukwuu nke nnabata nhọrọ na ọrụ maka njem ala nsọ. Sarria dị mfe iji na ọha iga si dị iche iche nke Spain.
Ka esi Sarria ụgbọ okporo ígwè:
The ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị ala nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si Madrid ka Sarria. E nwere a kpọmkwem njikọ na doo Madrid si Chamartin ụgbọ okporo ígwè ugboro abụọ n'ụbọchị, na a njem oge nke dị awa isii. Ọzọkwa, e nwere dị iche iche ụgbọ oloko na jikọọ Madrid na Santiago de Compostela na Lugo, Galician obodo site na nke ọ bụ nnọọ mfe iji Sarria, na ọtụtụ kpọmkwem njikọ ụbọchị ọ bụla. I nwere ike ịkpọ ihe niile ugboro na frequencies site na ịkpọtụrụ Renfe, Spain si mba ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ.
The ụgbọ okporo ígwè bụkwa ihe kasị mma nhọrọ mgbe ejegharị ejegharị si Barcelona. E nwere kwa ụbọchị kpọmkwem njikọ si Barcelona (ma ọ bụ i nwere ike ịgbanwe na Monforte de Lemos), na ụgbọ oloko n'oge ụbọchị (ma ọ bụrụ na ị na ikpokọta Ave ma ọ bụ elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na Long anya nhọrọ) na n'abali ụgbọ oloko. The nkezi njem oge si Barcelona bụ 12 awa. The ụgbọ okporo ígwè si Barcelona na Sarria nwekwara-ejikọ na ndị ọzọ isi obodo tinyere Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, na Leon.
Si Santiago de Compostela, Renfe enye abụọ kwa ụbọchị ụgbọ oloko na Sarria: otu na 5 pm (awa abụọ ije oge); na na 6.07 pm (na a na njem oge nke fọrọ nke nta awa anọ).
site Lugo, na ụgbọ okporo is also the most comfortable option. Renfe awade ọtụtụ kwa ụbọchị jikọrọ ga-ị na Sarria si Lugo na 30 nkeji.
Thunder Hiking Malite ihe: WESTWEG nzọ ụkwụ - GERMANY
Ọ nwere ike kwuru na Westweg nzọ bụ niile si malite German anya hiking ụzọ ụkwụ. Ọ ghọrọ onye mbụ ẹkedọhọde ụzọ nke ya ụdị azụ na 1900. Kemgbe ahụ, nzọ ka toro ikpuchi a anya nke 177 kilomita (285 kilomita) — starting in Pforzheim in the north and ending in Basel in the south.
N'ụzọ dị iche na Mittelweg na Ostweg, na Westweg ewe gị ukwuu n'ime site n'ebe ọdịda anyanwụ nke ugwu. Na dị ka ị na-aga, ị ga-ahụ eke na di iche iche nke kasị German ala ugwu. The oké fir na spruce ọhịa. Nke a bụ ihe na-enye ugwu mbio aha ya, na treeless expanses ke edere edere Black Forest. Jụụ ugwu ọdọ mmiri, panoramic rock crests, ice ndagwurugwu, na ugwu.
n'etiti, ị ga-ịrị elu ọnụ ọnụ ugboro ugboro. Ị soro bulie onu n'elu ala dị larịị nke Hornisgrinde na gara Belchen na Hochblauen. Enwe echiche na Schliffkopf na agagharị elu moo gburugburu Hohloh. A ezi akwa mgbe gị ibugo onu, n'ezie, ga-nrigo Feldberg. The kasị elu ugwu ke Black Forest.
Ka esi Westweg ụgbọ okporo ígwè:
Kasị hiking erukwa nwere ike gbasaa na gh anya. Nke ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ obodo nta tinyere hiking ụzọ ụkwụ nwere ike ịbụ ruru ọma ụgbọ okporo ígwè. Great enyemaka maka-eme atụmatụ na ibugo onu bụ n'ozuzu map n'efu nke Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Ọ na-egosi usoro ụgbọ oloko na ụgbọ ala niile maka KONUS na mpaghara na karịa.
Na mgbakwunye, ọtụtụ obodo nwere ihe pụrụ iche Atụmatụ maka hiking njegharị na ụbọchị njem maka ha KONUS ọbịa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ a ogologo ọnụnọ ọ pụrụ ịbụ bara uru iji nweta a SchwarzwaldCard nakwa. Nke a kaadị bụ a mma ego ma ọ bụrụ na ị na-eji ego jikọọ na kaadị intensively.
Offenburg ka Freiburg Ụgbọ oloko
Stuttgart na Freiburg Ụgbọ oloko
Leipzig ka Freiburg Ụgbọ oloko
Nuremberg na Freiburg Ụgbọ oloko
Njikere na-etinye na gị hiking akpụkpọ ụkwụ na-enwe ụfọdụ uwa hiking? Akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè n'ime nkeji na na NO mmezi ụgwọ na Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#hikes #hiking #Hikingstartingpoints #trails longtrainjourneys trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ
5 Best Obodo ọṅụṅụ Iji-aṅụ na-agbalị Na Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
Top Yoga mgbaba na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe, Yoga na Europe
Olee otú Iji Zụlite Travel Dị A Nomad Site Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe